Ama-vacuum cleaner ashibhile angcono kakhulu ka-2022: umhlahlandlela wokuthenga kanye nezaphulelo ezinhle
vacuum cleaners ezishibhile
Umshini wokuhlanza irobhothi
umshanelo vacuum cleaner
Ufuna thenga i-vacuum cleaner eshibhile? Imakethe yevacuum cleaner ikhule ngesivinini eminyakeni edlule. Sikwazile ukubona ukuthi ukukhethwa kwemishini yokuhlanza emakethe kukhule kanjani. Kunezinhlobo eziningi zemikhiqizo nezinhlobo ezitholakalayo. Zonke zinezici zazo futhi ezimweni eziningi zinokusetshenziswa okuqondile, kepha ukukhetha kubanzi kakhulu. Ngakho abasebenzisi banokuningi abangakhetha kukho.
Uma siyothenga i-vacuum cleaner entsha, ukukhetha kungase kube nzima. Nakuba kunezici ezimbalwa wonke umthengi azifunayo. Sifuna isicoci se-vacuum sekhwalithi kodwa esingabizi kakhulu. Lokho ngokuvamile kuyisifiso seningi labantu. Ngalesi sizathu, sikushiya ngezansi nokukhethwa kwemishini yokuhlanza eshibhile.
Wonke angamamodeli ekhwalithi kodwa amanani awo ayafinyeleleka. Ukuze ukuvuselela i-vacuum cleaner yakho akusho umzamo oweqile. Sikutshela kabanzi mayelana nawo wonke lawa mamodeli ngezansi.
Ama-vacuum cleaner angcono kakhulu ashibhile
Senze ukukhetha kwamamodeli amaningana. Wonke angamamodeli agqama ngokuba nenani elifinyeleleka kakhulu kubasebenzisi, kodwa ngaphandle kwalokhu kusho ukuyeka ikhwalithi. Ngezansi sikushiya netafula elinemininingwane eminingi yale modeli ngayinye. Ngemva kwetafula sikhuluma ngamunye wabo ngamunye ngokuningiliziwe.
Ngenxa yale datha ungathola umbono ocacile mayelana nokuthi iyiphi imodeli okungenzeka kube yiyo onentshisekelo kakhulu ekuthengeni.
I-Cecotec Robot Vacuum Cleaner kanye ...
I-Lefant F1 Robot Vacuum...
Vacuum Broom ngaphandle...
I-Rowenta XPert 3.60 Flex...
I-Taurus Homeland Endless -...
Isicoci se-Cecotec Vacuum ngaphandle...
Amandla e-Rowenta Swift ...
I-AEG LX7-2-EB-P Vacuum...
Ama-vacuum cleaners angcono kakhulu ashibhile
1 Ama-vacuum cleaner angcono kakhulu ashibhile
2 Ama-vacuum cleaners angcono kakhulu ashibhile
2.1 I-Cecotec Excellence 1090 Conga
2.3 I-Cecotec Dustick Easy Conga
2.5 IKärcher WD3
2.7 I-AmazonBasics Bagless Canister Vacuum
2.8 I-VicTsing Cordless Handheld Vacuum Cleaner
2.9 I-Rowenta Air Force Extreme RH8828
3.7 I-2 ku-1
3.8 asikho isikhwama
4 Izinhlobo ezinhle kakhulu zokuhlanza i-vacuum
5.3 Izinhlobo zokuhlunga
5.5 Akukho okukuqinisekisayo?
Uma imininingwane ebaluleke kakhulu yalezi zicoci ze-vacuum isibonisiwe, manje singaqhubeka nokukhuluma ngale modeli ngokujula okwengeziwe. Ngale ndlela ungafunda kabanzi mayelana nalawa mamodeli nokusebenza kwawo. Ngakho-ke, uma kukhona okufanelana nezidingo zakho, uzokwazi ukukwazi ngokushesha.
I-Cecotec Excellence 1090 Conga
Sivula uhlu ngalesi sicoci se-robot vacuum esivela ku-Cecotec, uhlobo lomkhiqizo owaziwa emkhakheni ngokukhiqiza izicoci zerobhothi ezinhlobonhlobo. Kuyimodeli, njengawo wonke amarobhothi, inketho ekhululekile kakhulu. Ngoba okumele sikwenze wukuyihlela bese iqala ukuhlanza iphansi lendlu yethu. Ihlanza izikhathi ezine futhi inenani lezindlela zokuhlanza ezingu-6. Ayigcini nje ngokucofa, kodwa futhi i-mops kanye nokushanela. Ngakho-ke, yenza ukuhlanza okuphelele kwendlu. Ngaphezu kwalokho, isebenza ngokuphelele kuzo zonke izinhlobo zaphansi.
Lapho uhlanza endlini, ngenxa yobuchwepheshe bayo, ngeke ingqubuzane nefenisha, abantu, amakhona noma iwe phansi ezitebhisini. Ngakho-ke, singahlala futhi sivumele irobhothi lenze umsebenzi walo. Inebhethri eyinika ibanga lemizuzu eyi-160. Lapho ibhethri selizophela, irobhothi libuyela ngqo kusizinda salo ukuze ligcwale kabusha. Ngakho-ke akufanele sikhathazeke ngalokho. Inethangi elinomthamo omkhulu, elisivumela ukuthi sihlanze yonke indlu ngaphandle kokuyichitha.
Njengesihlungi sinesihlungi se-HEPA, lokhu kusho ukuthi singasihlanza kalula. Vele ubeke ngaphansi kukampompi futhi uyeke wome. Ngakho, isivele ihlanzekile futhi isilungele ukusetshenziswa futhi. Kuyindlela enethezekile kakhulu esivumela ukuthi songe imali kuzihlungi. Leli robhothi nalo ligqamile ngoba alinomsindo. Irobhothi liza nezinto ezifakiwe ezifaka phakathi amabhulashi ambalwa, isisekelo sokushaja, isilawuli kude kanye ne-adaptha.
Nakuba kungeyona yodwa kulolu hlu ezoba khona, esinye sezici ezivelele kakhulu zalesi sicoci se-Ecovacs ukuthi sihambisana ne-Alexa nezinhlelo zokusebenza zeselula, ngakho-ke singakwazi ukwazi ukuthi ikuphi ngaso sonke isikhathi. Ngaphezu kwalokho, inolunye uhlobo lobuhlakani, kulokhu iSmart Navi 3.0 Navigation esebenza ngenxa yelaser ekuvumela ukuthi wazi lapho uya khona futhi dala imephu yekhaya lethu.
I-Ecovacs Deebot OZMO 900 -...
Njengoba sesishilo, ngohlelo lokusebenza lwe-ECOVACS izithiyo virtual kungadalwa kusukela mobile ukubeka phambili noma ukuvimba izindawo ukuze irobhothi lihlanze kuphela lapho sifuna khona. Ngakolunye uhlangothi, singasebenzisa enye yezindlela zayo ezine zokuhlanza ukuze siqinisekise ukuthi ihlanza lapho sifuna khona, kanjani futhi nini.
I-Cecotec Dustick Easy Conga
Endaweni yesibili sithola le modeli yohlobo olufanayo, nakuba kulokhu kuyi-vacuum cleaner engu-2-in-1. Lokhu kusho ukuthi ihlanganisa isicoci esibamba ngesandla esingasikhipha bese sihlanza izindawo ezithize kakhulu ezifana ne-vacuum cleaner. usofa noma izihlalo zemoto. Ngenxa yalokhu singakwazi ukwenza ukuhlanza okujulile kwendlu. Igqame kakhulu ngokusebenzisa ubuchwepheshe be-cyclonic, ubuchwepheshe obunikeza amandla amaningi. Ngaphezu kwalokho, lokhu kusho ukuthi ayilahlekelwa amandla ngokuhamba kwesikhathi. Okuthile okunikeza ukuthula kwengqondo okuningi kubasebenzisi.
Kuyimodeli ekhanyayo futhi kulula kakhulu ukuyisebenzisa ekhaya. Inesisindo esincane, okwenza ilawuleke kakhulu. Ikakhulukazi uma sinendlu enezitebhisi, ukuze kungabi nzima ukuyithwala usuka kwenye indawo uye kwenye. Le modeli isebenza ngezintambo, kanti ikhebula enalo lingamamitha angu-6. Ngakho-ke singakwazi ukuhambahamba endlini ngokunethezeka naphakathi kwamakamelo ngaphandle kokuhlala sixhuma futhi sinqamule. Ngaphezu kwalokho, lesi sicoci se-vacuum vacuum sisebenza kahle kuzo zonke izinhlobo zezindawo ezingaphezulu, okuhlanganisa nezitezi zokhuni.
Inediphozithi enamandla angu-1 litre. Lokhu kusinikeza umthamo owanele wokuhlanza indlu yonke izikhathi ezingaphezu kwesisodwa ngaphandle kwenkinga. Ngaphezu kwalokho, ukukhishwa kwe-tank kulula kakhulu futhi yindlela esiyihlanza ngayo. Lokhu futhi kwenzeka ngezihlungi, okugcinwa kwazo kulula. Njengoba kuyisihlungi se-HEPA. Ngakho-ke, kufanele simane siwahlanze. Mayelana nomsindo, akuyona ehlakaniphe kakhulu, kodwa ikhiqiza inani elifanayo lomsindo njenge-vacuum cleaner evamile. Kulula kakhulu ukuyigcina ngoba ayithathi indawo. Lesi sicoci se-vacuum siza namabhomu ambalwa engeziwe afakiwe.
Endaweni yesithathu sithola lesi sicoci se-vacuum se-Rowenta esingokwesiko, okungenani ngokwesakhiwo. Isebenzisa ubuchwepheshe be-cyclonic, obunikeza amandla amakhulu namandla okudonsa. Ngaphezu kwalokho, ayilahlekelwa lawa mandla ngokuhamba kwesikhathi. Ngakho-ke, singajabulela ukusetshenziswa kwayo isikhathi eside ngokunethezeka okukhulu. Isiqinisekiso esibalulekile kubantu abaningi. Isebenza kahle kakhulu kuzo zonke izinhlobo zezindawo ezingaphezulu, kodwa ikakhulukazi ezindaweni eziqinile (itshe, i-tile ...). Ngakho-ke uma unalolo hlobo lwesitezi, iyi-vacuum cleaner ekahle kubo.
I-Rowenta RO3753 Compact ...
Isebenza nethangi elinamandla angu-1,5 litre esingakwazi ukulithulula kalula. Ngaphezu kwalokho, kuyinani elanele lokukwazi ukuhlanza indlu yonke ngaphandle kwenkinga. Iphinde ibe nesihlungi se-HEPA, okusho ukuthi singayigeza. Vele ubeke isihlungi ngaphansi kompompi ukuze ususe ukungcola. Uma lokhu sekwenziwe, siyayiyeka yome bese siyibuyisela ku-vacuum cleaner. Konke lokhu ngaphandle kokulahlekelwa amandla okumunca. I-Rowenta vacuum cleaner inentambo, inentambo engamamitha angu-6,2. Lokhu kusenza sikwazi ukuhambahamba endlini ngokukhululeka okukhulu.
Isisindo sayo singu-6,8 Kg, kodwa ungakhohliswa yilo mfanekiso, ngoba iyimodeli elula ukuyiphatha nokuhambahamba endlini. Ngenxa yokwakheka kwayo enamasondo, iyi-vacuum cleaner ehamba kakhulu. Ngaphezu kwalokho, uma kuziwa ekugcinweni akuthathi isikhala esiningi, ngakho kulula ukuthola indawo yokuyibeka. Idala umsindo ofanayo nowe-vacuum cleaner evamile, ngakho-ke azikho izimanga kulokho. Akuwona umsindo ocasula kakhulu.
Endaweni yesine sithola lesi sicoci se-vacuum esisetshenziswa kakhulu njengesicoci se-vacuum yemboni, nakuba singasisebenzisa ezimeni eziningi ezahlukene. Kodwa, igqama ikakhulukazi ngokuba imodeli enamandla kakhulu enikeza amandla amakhulu okudonsa. Ngale ndlela uzokwazi ukususa konke ukungcola okuqoqiwe kalula kakhulu nangempumelelo kakhulu. Ngaphezu kwalokho, iphinde isebenze ngokungcola okumanzi, ngakho-ke isivumela ukusetshenziswa okuningi kunomshini wokuhlanza ojwayelekile kulokhu. Ngakho-ke iguquguquka kakhulu.
I-Kärcher MV 3 Vacuum Cleaner ...
Inethangi elikhulu lomthamo, yingakho lenzelwe ukusetshenziswa ezimbonini lapho kunqwabelana khona ukungcola okuningi. Lokhu kusinikeza inketho yokukwazi ukuhlanza izikhala ezinkulu ngaphandle kokukhipha yonke imizuzu embalwa. Ngakho ukuhlanza kuphumelela kakhulu ngazo zonke izindlela. Ngaphezu kokuhlanza, iphinde ibe nomsebenzi wokufutha osebenza kahle kakhulu. Ngakho ungakwazi ukufeza ukuhlanza okujulile.
Kuyimodeli enesisindo esingu-7,66 kg. Kodwa, naphezu kwale nombolo, iyimodeli esingakwazi ukuyiphatha kalula. Ngaphezu kwalokho, sibonga ukwakheka kwayo okunamasondo amane, ihamba kakhulu futhi izinzile. Ngakho-ke, ngeke iwe noma iqedwe nganoma yisiphi isikhathi ngenkathi siyisebenzisa. Ngakho-ke sinendaba nokuhlanza kuphela. Inekhebuli enobude obungamamitha angu-4. Ayinde kakhulu, kodwa isinika ukuhamba okwanele.
Le Braava 390t yakhelwe ukuhlanza amagumbi amakhulu amaningi. Inephasi lokukhuhla kathathu kanye ne-iadapt 2.0 yayo enamakhyubhu okuzulazula esiza leli robhothi elincane ukuthi lilandelele indawo yalo. Njengenketho, singakhetha iphasi eyodwa uma sifuna kuphela ukususa ukungcola, uthuli, izinwele zesilwane esifuywayo kanye nezinto ezingezwani nomzimba noma sisebenzisa iphasi yakho yokuthathu ukukhuhla kufika ku-33m²
I-iRobot Braava 390t, irobhothi...
Ngokuqondene nezinye izici, kufaka phakathi izindwangu ze-microfiber ezi-4, ezimbili kuzo ezokugeza nezimbili zokugunda, okusho ukuthi ingomisa i-mop.
I-AmazonBasics Bagless Canister Vacuum
Imodeli elandelayo iyisicoci se-vacuum esivamile esivelele ngokunikeza umsebenzi osebenza kahle kakhulu futhi ongenazinkinga. Kuyimodeli yakudala kakhulu yokwenza ukuhlanza indlu. Kusivumela ukuthi si cleane kuzo zonke izinhlobo zamaphansi futhi inamandla anele. Ayilona elinamandla kakhulu ohlwini, kodwa ayishiyi noma yikuphi ukungcola ngaphandle kokuhlanza noma nini. Ngakho-ke iwufeza ngokuphelele umsebenzi wayo ngaso sonke isikhathi.
Inethangi elinamandla angu-1,5 amalitha, okusivumela ukuthi sihlanze indlu izikhathi eziningana ize igcwale. Ukukhishwa nokuhlanzwa kwale diphozi kulula kakhulu. Ngakho akudingi ukulungiswa okuningi. Kwenzeka okufanayo ngesihlungi se-HEPA esisihlanganisayo. Uma siqaphela ukuthi inokungcola okuningi okuqoqiwe, kungcono ukuyimanzisa, uyeke yome bese uyisebenzisa futhi. Ngale ndlela ibuyela ekubeni namandla amakhulu okumunca njengosuku lokuqala. Indlela elula kakhulu.
Isebenza ngezintambo, kulokhu inekhebula lamamitha angu-5. Lokhu kusenza sikwazi ukuhambahamba endlini ngokunethezeka futhi kusinika inkululeko eningi. Ngokuqondene nesisindo, le modeli inesisindo esingu-4,5 kg. Ngakho-ke, akuyona enye yemishini yokuhlanza enzima kakhulu, ukuze kube lula ukuhambahamba endlini futhi sihambe nayo uma kufanele sikhuphuke izitebhisi. Ngaphezu kwalokho, ngenxa yokuklama kwayo ngamasondo, ihamba kakhulu, ngakho-ke, akudingekile ukuba ukhathazeke futhi uyithwale ngaso sonke isikhathi. Idala umsindo ofanayo nowe-vacuum cleaner evamile. Ngaphezu kwalokho, le modeli iza nezinsiza ezifakiwe.
I-VicTsing Cordless Handheld Vacuum Cleaner
Endaweni engaphambili sithola lesi sicoci se-vacuum esiphathwa ngesandla. Isicoci se-vacuum sikasayizi oncishisiwe futhi esiklanyelwe ukuba sisisebenzise ezindaweni lapho isicoci se-vacuum esijwayelekile singakwazi ukufinyelela kuso. Ngakho-ke, kuyindlela enhle yokusebenzisa kusofa noma ezihlalweni zemoto. Amasayithi okuhlanzwa kwawo kuyinkimbinkimbi futhi kudinga ukunemba okukhulu. Ngenxa yalesi modeli kuzoba lula kakhulu ukufinyelela lezi zindawo ukuze zihlale zihlanzekile.
Ukuze imodeli yosayizi omncane inamandla amaningi. Ngakho-ke kuzosisiza ukuthi siqede ngisho nokungcola okuyinkimbinkimbi kakhulu. Ngakho usofa uyohlale ucwebezela. Ngaphezu kwalokho, inesisindo esincane kakhulu, okwenza ukusetshenziswa kwayo kukhululeke kakhulu futhi kulula. Kuyalawuleka kakhulu, nakho kusiza kakhulu, ngoba umsebenzi wokuhlanza kulezi zindawo akulula ngaso sonke isikhathi. Le modeli isebenza ngaphandle kwezintambo. Inebhethri elikwazi ukuzimela imizuzu engu-30 esingalishaja.
Inediphozithi esingayithulula noma nini ngokukhululeka okukhulu. Ngaphezu kwalokho, ukuhlanza nokugcinwa kwayo kulula kakhulu. Okufanayo kuya kusihlungi esifakiwe. Kuyisihlungi esingawasheka. Ngakho-ke lapho sibona ukuthi iphelelwa amandla athile, sigeza isihlungi ngaphansi kukampompi, siyiyeke yome futhi siyibuyisele. Ngakho, isebenza ngokuphelele futhi. Ihlanganisa izesekeli ezimbalwa, njengezimbobo zezindawo ezihlukene nemisebenzi.
I-Rowenta Air Force Extreme RH8828
Ekugcineni sithola lesi sicoci sevacuum se-Rowenta broom. Kuyimodeli emangalisayo ngoba inamandla kakhulu, ngakho-ke sizokwazi ukuqeda uthuli nokungcola okuqoqwe endlini yethu. Isebenza kahle kakhulu kuzo zonke izinhlobo zezindawo ngenxa yebhulashi layo, eliklanyelwe ukwenza kanjalo. Ngakho-ke, ngisho noma unezitezi zokhuni, ungazisebenzisa ngaphandle kokukhathazeka. Kusiqinisekisa ukuhlanza okuphumelelayo nokuhlala njalo.
I-Rowenta Air Force Extreme...
Le modeli isebenza ngaphandle kwezintambo. Inebhethri enebanga lemizuzu engama-45. Isikhathi okufanele sanele ukuhlanza indlu yonke. Uma ibhethri seliphelile, siyalifaka ekushajeni. Kuthatha cishe amahora ayisishiyagalombili ukushaja ngokugcwele, okungenzeka kube yinde kakhulu. Ngakho-ke, kungcono ukuyishaja njalo ebusuku. Ngakho-ke usulungile ekuseni uma udinga ukuhlanza indlu. Le modeli inethangi elikhiphekayo elinamandla angama-0,5 amalitha.
Futhi inesihlungi se-HEPA esingasihlanza. Ngakho-ke kufanele uwumanzise ngaphansi kukampompi, uyeke wome futhi uwubuyisele. Ngenxa yalokhu singaphinde sijabulele isicoci se-vacuum njengokungathi bekuwusuku lokuqala futhi sivala ngamandla amakhulu nangokunemba. Ngokuqondene nomsindo, ubanga umsindo kakhulu kunamanye amamodeli asohlwini, nakuba ungewona umsindo ocasulayo noma ikhanda.
Njengoba sesishilo ngaphambili, kunezinhlobo eziningi ze-vacuum cleaner ezitholakalayo namuhla. Ngayinye inezinto zayo ezihlukile ezizenza zibe ngcono ezimeni ezithile. Ngakho-ke, kulula ukucacisa ukuthi hlobo luni lwe-vacuum cleaner esiyidingayo noma esiyifunayo. Njengoba kuzokwenza ukusesha kwethu kucace kakhudlwana. Sikutshela kabanzi mayelana nezinhlobo ezahlukene ze-vacuum cleaner ngezansi.
Isicoci sevacuum semite
i-liquid vacuum cleaner
isilwane vacuum cleaner
2 koku-1 kokuhlanza i-vacuum
izimboni vacuum cleaners
I-vacuum cleaner yemoto
Ama-vacuum cleaner angenazintambo
isihlungi se-vacuum cleaners samanzi
i-cyclone vacuum cleaner
isihlibhi se-vacuum cleaner
ama-vacuum cleaner aphathwayo
ama-vacuum cleaners angenasikhwama
Isicoci se-robot vacuum ne-mop
Bona i-vacuum cleaner yesihlibhi
Lawa ama-vacuum cleaner endabuko esiwazi sonke. Ngalo mqondo, bagcina umklamo wakudala kanye nokuma. Nakuba ubuchwepheshe buthuthuke kakhulu futhi ngokuvamile buyisimanje futhi bunamandla. Zingamamodeli asebenza kahle kuzo zonke izinhlobo zezindawo futhi esingagcini ngazo ukuhlanza uthuli lwendlu kuphela, kodwa futhi nazo zonke izinhlobo zokungcola.
Bona izihlanzi ze-vacuum zomshanelo
Lezi zicoci ze-vacuum zigqama ngokulingisa isimo somshanelo. Ngakho ziqondile futhi zinde. Ngokuvamile zisebenza ngamandla ebhethri futhi zinamandla amancane kunesicoci se-vacuum esivamile. Nakuba zigqama ngokukhanya, ukulawuleka kanye nokuphathwa kwazo okungaphezulu.
Bona isicoci se-robot vacuum
Ikilasi elithola ukuba khona okuningi eminyakeni yamuva. Ziyindlela ekhululekile kakhulu njengoba okumele sikwenze ukuyihlela futhi irobhothi lizosihlanzela indlu. Zisebenza ngamabhethri futhi zihlale zigqama ngesimo sazo esiyindilinga ngesimo sepuleti. Nakuba, futhi zibiza kakhulu kune-vacuum cleaner evamile.
Lawa ama-vacuum cleaner angamasayizi amancane ongakwazi ukuwabamba ngesandla sakho ngokukhululeka. Zenzelwe ukufinyelela emakhoneni isicoci se-vacuum esivamile esingafinyeleli kuso, njengezihlalo zemoto noma usofa. Ziyakwazi ukulawuleka, zinesisindo esincane futhi intengo yazo ivamise ukushibhile. Amanye ama-vacuum enduku afika ne-vacuum eyakhelwe ngaphakathi.
Bheka izihlanzi eziphathwa ngesandla
Bona izihlanzi ze-cyclone vacuum
Izicoci ze-Cyclonic vacuum zigqama ngokudala isivunguvungu somoya esikhulisa amandla okudonsa, esiza ukuhlukanisa ukungcola kalula futhi ayilahlekelwa ukusebenza kahle ngokuhamba kwesikhathi.
Bona izinto zokuhlanza umlotha
Lezi zinhlobo ze-vacuum cleaner zenzelwe ukumunca umlotha ovela eziko, ama-barbecues noma ezinye izinhlobo zemisebenzi edala ukunqwabelana komlotha. Zinokusetshenziswa okuqondile kakhulu, nakuba futhi zimunca uthuli nokungcola. Kodwa umsebenzi wayo oyinhloko ukuqeda umlotha noma sawdust.
Bona izicoci ze-vacuum ezingu-2-in-1
Lawa ama-vacuum cleaner lapho sithola khona isicoci esiyinhloko nesiphathwa ngesandla. Ngokuvamile amamodeli e-broom afika ne-vacuum cleaner ehlanganisiwe ephathwa ngesandla. Ngakho ungakwazi ukuhlanza yonke indlu ngokunembe kakhudlwana. Njengoba une-vacuum cleaner yaphansi futhi enye yezindawo ezifana nosofa noma amakhona angafinyeleleki kalula.
Bona izinto zokuhlanza ezingenazikhwama
Kuwuhlobo lwesicoci se-vacuum esisibona kumabhrendi amaningi. Esikhundleni sokuba nezikhwama zendabuko lapho kugcinwa khona ukungcola, zinesitsha esikhishwayo. Ngale ndlela, lapho ligcwala, sikhipha ithangi futhi silithulule. Ngakho, asichithi imali ezikhwameni. Ngaphezu kwalokho, ukugcinwa kwalezi zimali kulula kakhulu.
Bheka izinto zokuhlanza amanzi
Sibhekene nohlobo olukhethekile kakhulu lwesicoci se-vacuum njengoba silungele labo bantu abanezinkinga zokungezwani nokungezwani nothuli noma izibungu. Kusivumela ukuthi sihlanze indlu, kodwa futhi kusiza ukuhlanza umoya ngenxa yokuhlunga kwamanzi. Siyabonga ngakho sinokuhlanza okujulile kwendlu futhi siqinisekisa ukuthi umoya ugcinwa uhlanzekile ngangokunokwenzeka.
Bona i-vacuum cleaner yezimboni
Lezi zinhlobo ze-vacuum cleaner zenzelwe ukuhlanza izindawo zentengiso, amahhotela noma izindawo zokudlela noma embonini. Njengoba begqama ngokuba namandla amakhulu angamunca yonke into. Ngenxa yala mandla, ukuhlanza okusebenza kahle kakhulu futhi okuphumelelayo kufinyelelwa. Ngakho-ke, ukusetshenziswa kwasekhaya akuyona indlela engcono kakhulu yokusebenzisa ngokunenzuzo.
Izinhlobo ezinhle kakhulu zokuhlanza i-vacuum
Uma sifuna isicoci se-vacuum esisha sibheka kakhulu umkhiqizo. Kwesinye isikhathi singase sifune ukuthenga imodeli yohlobo olufanayo esesivele sinalo noma sibheja ngemikhiqizo eyaziwayo. Ngaphandle kokungabaza, umkhiqizo unethonya elikhulu ezikhathini eziningi. Njengoba sivamise ukukhetha amabhrendi esiwaziyo noma esiwathembayo. Ukukhethwa kwemikhiqizo kubanzi kakhulu namuhla, nakuba kukhona okukhethekile ohlotsheni oluthile lwe-vacuum cleaner.
I-Taurus vacuum cleaner
I-Polti vacuum cleaner
I-vacuum cleaner yephupho
i-philips vacuum cleaner
I-Ikohs vacuum cleaner
I-Makita vacuum cleaner
I-LIDL vacuum cleaner
I-Bosch vacuum cleaners
I-Rowenta vacuum cleaners
Izihlanzi ze-vacuum ze-Karcher
I-Conga vacuum cleaner
I-Ecovacs vacuum cleaner
Iwumkhiqizo womkhiqizi wamarobhothi e-vacuum par excellence. Ubani ongazi i-roomba vacuum cleaners? Sekuyiminyaka engaba ngu-25 besemakethe, ngakho-ke banolwazi oluhle kakhulu. Ngaphezu kwalokho, amarobhothi abo ngokuvamile athuthuke kakhulu futhi yiwo anikeza ukusebenza okuhle kakhulu. Ngakho-ke uma ufuna isicoci se-robot vacuum, akungabazeki ukuthi uhlobo okufanele ulukhethe.
Enye yemikhiqizo eyaziwa kakhulu emakethe. Inkampani enolwazi olukhulu phakathi neminyaka edlule, ngakho-ke amamodeli ayo ayisiqinisekiso sekhwalithi nokusebenza okufanele. Bakha izinhlobo eziningi zezinto zokuhlanza, kusukela kusihlibhi sendabuko, ukuya kumshanelo, esandleni kanye nokunye okungu-2 koku-1. Zitholele lapha amamodeli angcono kakhulu I-Rowenta vacuum cleaners.
Olunye uhlobo abasebenzisi abaningi abalwaziyo futhi olufana nekhwalithi. Banolwazi olunzulu emakethe futhi banokusekelwa ngabathengi, njengoba kuwuphawu abaningi ababheja kulo ngoba bayazi ukuthi bazothola umkhiqizo osezingeni. Bakha izinhlobo eziningi ze-vacuum cleaners (umshanelo, isihlibhi, ihandheld, izimboni...), lapha ungabona I-Bosch vacuum cleaners ikhethwa ngabasebenzisi.
Igama lingase lingazwakali lijwayelekile kwabaningi, kodwa bayinkampani enolwazi kulo mkhakha. Ngaphezu kwalokho, i- i-karcher vacuum cleaners Bagqama ngokwenza ama-vacuum cleaner anamandla ahlala enikeza ukusebenza okuhle kakhulu. Ngakho-ke uma ufuna isicoci se-vacuum lapho amandla eyisici esibalulekile, kungenye yemikhiqizo okufanele icatshangelwe. Baphinde bakhiqize izinhlobo eziningi (izimboni, umlotha, imoto, isihlibhi...).
Iwuphawu ingxenye enkulu yabathengi abayaziyo. Ngokuvamile ngoba iyifemu imikhiqizo yayo egqama ngekhwalithi yayo nokusebenza okuhle ngokuhamba kwesikhathi. Ngakho thenga isicoci se-dyson vacuum futhi kuyisiqinisekiso kanye nenketho ephephile ongaphendukela kuyo lapho ufuna isicoci se-vacuum. Bakha izinhlobo ezahlukene zokuhlanza (i-sledge, izimboni, isandla, umshanelo...).
Noma i-ecovacs vacuum cleaners zintsha uma kuqhathaniswa, iqiniso liwukuthi uhlelo lwabo lokuzulazula, isofthiwe kanye nentengo yokuncintisana kubenze baba enye yezinketho ezingcono kakhulu zalabo abafuna i-robot vacuum cleaner. Uma unesithakazelo ekuthengeni eyodwa, ungangabazi ukubheka amamodeli ale nkampani.
Lapho uthenga i-vacuum cleaner kufanele ucabangele uchungechunge lwemininingwane. Njengoba ngale ndlela singenza isinqumo ngokunemba okukhulu ngaphandle kokwesaba ukuthenga imodeli engalungile. Kodwa, kubalulekile ukuzicabangela zonke futhi ucabange ngaso sonke isikhathi ukuthi yini ngempela esiyifunayo. Konke lokhu kuzokwenza ukusesha kwethu kube lula kakhulu. Njengoba kubalulekile ukucabanga ngesicoci se-vacuum njenge-investment yekhaya lakho, awufuni ukuthenga umkhiqizo ongeke uhlangabezane nezidingo zakho.
Enye imininingwane ebaluleke kakhulu lapho ukhetha i-vacuum cleaner amandla. Noma nini lapho sifunda imininingwane ye-vacuum cleaner sibona ukuthi amandla akhonjisiwe. Nakuba kubalulekile ukubonisana nayo, kufanele sithathe leyo nombolo njengenkomba. Akuyona into ehlala isitshela uma imodeli inamandla kakhulu.
Kukhona amamodeli asephepheni anamandla amancane futhi empeleni afisa kangcono. Ngenxa yalesi sizathu, kuhle ukuthi sicabangele inombolo abavame ukuyibonisa mayelana namandla, kodwa kufanele siyithathe njengenkomba yamandla abo angempela.
Okusithakaselayo ukuthi isicoci sevacuum sinamandla. Njengoba ngale ndlela sizokwazi ukuqeda ngokungcola nothuli olunqwabelana ekhaya ngokushesha futhi ngokunethezeka. Kodwa, futhi asifuni isicoci se-vacuum esinamandla kakhulu. Ngoba lokhu kubangela ukuthi inamathele kuzo zonke izinhlobo zezindawo. Ngokufanelekile, isicoci se-vacuum sinesilawuli samandla. Ngale ndlela singakwazi ukunquma amandla esifuna ukuwasebenzisa kuye ngesimo.
Ngokuvamile, izicoci zezintambo ezinezintambo (lezo ezixhunywe kumapayipi amakhulu) zinamandla kakhulu kunezinamandla ebhethri. Ngakho kuyimininingwane okufanele inakwe. Lokhu akusho ukuthi zingcono, ngoba ama-vacuum cleaner asebenza ngebhethri nawo amunca kahle. Kodwa kubalulekile ukuthi sikuqaphele lokhu futhi sicabangele le mininingwane.
Kuneminye imininingwane engasisiza kakhulu lapho sikhetha isicoci sevacuum esisodwa kunesinye. Lezi izici okungenzeka zingabi nokubaluleka okufanayo namandla noma uphawu, kodwa futhi ezinomthelela enqubweni yesinqumo. Ngakho-ke, kubalulekile ukuba sizikhumbule.
Ukusebenziseka kalula kanye nokusebenziseka kalula kubalulekile. Sifuna ukukwazi ukuhambahamba endlini ngokukhululeka ngaso sonke isikhathi. Akudingeki uhudule isicoci se-vacuum noma ukuthi sinzima kakhulu. Futhi ukuthi ayiqedi ngenkathi siyisebenzisa. Ngakho-ke, lezi zinhlobo zezinto kufanele zibhekwe. Ikakhulukazi ukuthi ayinzima kakhulu kuwe, ngoba ngaphandle kwalokho umsebenzi wokuhlanza indlu uzoba nzima kakhulu kunalokho osuvele ukhona.
Ukugcinwa nokuhlanzwa kwesicoci se-vacuum nakho kungenye imininingwane okufanele icatshangelwe. Njengoba sifuna into engadingi isikhathi esiningi. Uma sinediphozithi, into amamodeli amaningi anayo, ukuhlanza nokugcinwa kulula. Vele ukhiphe ithangi, lithulule bese ulimanzisa ukuze ususe noma yikuphi ukungcola okusele. Umsebenzi olula othatha imizuzu embalwa kuphela. Ngaphezu kwalokho, silondoloza njengoba akudingeki ukuthi sithenge izikhwama.
Amamodeli amaningi anokukhanya kanye nenkomba yebhethri. Lena imininingwane eyengeziwe engasisiza senze ukusetshenziswa kwe-vacuum cleaner kuphumelele kakhulu. Akungabazeki ukuthi ziyizici ezinhle neziwusizo. Nakuba bengekho noma akufanele banqume. Okungenani akunjalo uma lokho kusho ukuthi intengo yesicoci se-vacuum iphezulu.
Enye imininingwane ebalulekile uma uthenga i-vacuum cleaner enezintambo ukuthi ucabangela ubude bentambo. Njengoba kungase kube kufushane kakhulu futhi lokhu kukukhawulela kakhulu ngesikhathi uhlanza. Ngoba njalo uma ushintsha amagumbi kufanele unqamule futhi. Ngakho-ke ikhebula elide liyindlela ekhululekile kakhulu ekusebenzeni.
Abahlanza ivacuum banamuhla banezihlungi. Uhlobo lwesihlungi yinto abaningi abangayinaki, kodwa iyimininingwane ebaluleke kakhulu. Ngoba kungaholela ekongeni okubalulekile emalini nasekulungiseni. Ngakho-ke kubalulekile ukuthi sihlole uhlobo lwesihlungi isicoci se-vacuum esisifunayo sinaso.
Okuvame kakhulu namuhla ukuthi inesihlungi se-HEPA. Kuwuhlobo lwesihlungi lokho imunca ukungcola okuningi. Kodwa futhi, singayihlanza kalula ukuze ukwazi ukuqhubeka nokuyisebenzisa isikhathi eside. Ngaphezu kwalokho, indlela yokuhlanza lolu hlobo lwesihlungi ilula kakhulu. Kufanele nje siwumanzise, ​​siwuyeke wome bese usibuyisela ku-vacuum cleaner. Inqubo elula.
Siphinde sibe nezihlungi zokukhanya okuluhlaza okwesibhakabhaka, ezikhona kwezinye izinhlobo ze-vacuum cleaner njengalezo zamanzi. Angakwazi futhi ukuhlanzwa futhi abe nomthamo ophezulu wokumunca. Ngaphezu kokusiza ukuhlanza umoya. Kodwa anqunyelwe ezinhlotsheni ezithile eziqondile kakhulu zokuhlanza i-vacuum.
Ezinye izinto zokuhlanza zinezihlungi ezingaqinisekisiwe nge-HEPA. Lolu hlobo lwezihlungi alukwazi ukuhlanzwa, ngakho-ke ngezikhathi ezithile siphoqeleka ukuthi siziguqule. Okuthile okungakhululekile kubasebenzisi. Ngaphezu kwalokho, kuwukumosha imali okungadingekile ezimweni eziningi.
Ngakho-ke, kuyadingeka ukuthi sibheke uhlobo lwesihlungi isicoci se-vacuum esinaso. Njengoba isihlungi esingasihlanza singcono kakhulu kithi.
Ngokunengqondo, intengo futhi iyimininingwane ebaluleke kakhulu kubasebenzisi. Njengoba kuye ngesabelomali sethu sinemikhawulo ethile futhi kungase kube namamodeli esingakwazi ukuwakhokhela. Ngakho-ke, kubalulekile ukuthi sazi ukuthi yimaphi amamodeli esingakwazi ukuwafinyelela, ikakhulukazi kwezinye izinhlobo ze-vacuum cleaner.
Uma kwenzeka ufuna isicoci se-robot vacuum, amanani avamise ukuba phezulu kunamamodeli ajwayelekile. Futhi, ezimweni eziningi ezingaphezu kwama-euro angama-400. Yize kunemikhiqizo enamamodeli asuka kuma-euro angaphezu kuka-200 nje. Ngakho-ke kuwutshalomali lwesikhathi eside, ngoba zihlala isikhathi eside. Kodwa, kubalulekile ukuyicabangisisa kahle.
Kukhona abahlanza ivacuum abavamile bawo wonke amanani. Singathola ama-vacuum cleaner cishe kuma-euro angama-80-90 asinika ikhwalithi enhle. Nakuba okuvame kakhulu ukuthi abiza ngaphezu kwama-euro angu-100, phakathi kwama-euro angu-100 no-200 sithola amamodeli amaningi emakethe. Ibanga okukhona kulo ukuhlukahluka kodwa esingahamba kulo ngokukhululeka.
Uma ungakasitholi isicoci se-vacuum esifanelana nalokho okufunayo, siyaqiniseka ukuthi uzosithola ekukhethweni okulandelayo kwemikhiqizo:
Zitholele zonke izihlanzi ze-vacuum ezikhona 🙂
Kwezinye izinhlobo eziqondile, njengezicoci ze-vacuum zezimboni noma ezimanzi, amanani avamise ukuba phezulu. Nakuba kungekho umehluko omkhulu. Kodwa kubalulekile ukuthi wazi ukuthi kwenzekani, ukugwema lezimanga ezingemnandi esikhathini esizayo. Ingxenye enhle ukuthi izinhlobo eziningi zemikhiqizo yethula amamodeli athengekayo. Ukuze kube lula kubo bonke abasebenzisi ukufinyelela kuzo.
Kunoma ikuphi, uma okufunayo kuwukulondoloza ekuthengeni isicoci se-vacuum esisha, kunemicimbi phakathi nonyaka lapho singathola khona okunikezwayo okumnandi kakhulu. Ezinye zalezi zinsuku yilezi:
ULwesihlanu Olumnyama kuma-vacuum cleaners
I-Cyber ​​​​Monday kuma-vacuum cleaners
Usuku Olukhulu kuma-vacuum cleaners
Ngakho-ke, sithola ama-vacuum cleaner ashibhile emakethe. Kunamamodeli amanani awo aqala ukusuka kuma-euro angama-60 kwezinye izimo. Kodwa, iningi livamise ukuba segcemeni ephakathi kwama-euro ayi-100 nama-200. Okuhle ukuthi izinga lama-vacuum cleaner namuhla liphezulu. Ngakho-ke namamodeli anenani elingaphansi kwama-euro ayi-100 azokunikeza ukusebenza okuhle.
I-Prime Day Vacuum Cleaners
I-Cyber ​​​​Monday Vacuum Cleaners
vacuum cleaners ezishibhile 2022 - Inqubomgomo yobumfihlo - Imininingwane mayelana namakhukhi